Photocall TV, nhọrọ na-adọrọ mmasị iji lelee DTT ebe ọ bụla | Site na Linux
Photocall TV, nhọrọ na-adọrọ mmasị iji lelee DTT ebe ọ bụla
Joaquin Garcia Cobo | | Aplicaciones, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Mgbe nsogbu COVID-19 gasịrị, ojiji na oriri nke ihe ịntanetị mụbara nke ukwuu. Mmụba ahụ bụ nke na ọtụtụ ụlọ ọrụ nke ọrụ ndị a nwere ịbawanye akụ nke sava ha ma belata ogo nnyefe nke ọdịnaya ha. Ihe dị ka akụkọ ifo ugbu a aghọọla omume na-aga n'ihu na-eto. Nkọwapụta ọrụ dị ka Photocall TV ma ọ bụ Pluto TV, n'etiti ndị ọzọ.
Online telivishọn bụ kpakpando ngwaahịa na dijitalụ ntụrụndụ, na-egosipụta ọrụ ihe nkiri nkiri na-asọ asọ, mana ọ bụghị naanị ha. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, iji ngwa na ngwa weebụ ndị mejupụtara nye DTT na ọwa onwe ha n'ịntanetị n'efu, ọtụtụ mgbe. Na agbanyeghị na ọtụtụ n’ime unu ga-ekwu na ọ bụ otu ihe ahụ ka ihe televishọn anyị na-enye anyị, eziokwu bụ na ọrụ ndị a na-enye anyị ohere lee ọdịnaya na ngwaọrụ ọ bụla ọ na-enyekwara anyị aka belata ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi agụnyere na ọdịnaya ahụ.
1 Gịnị bụ Photocall TV?
2 Kedu ọwa ndị m nwere ike ile na Photocall TV?
2.1 Ndị nwe obodo
2.3 Ndị ọzọ
3 Olee otu Photocall TV si aru oru
3.3 Otu esi edekọ mmemme
4 Esi lee Photocall TV na igwe onyonyo anyị
4.3 Igbe TV
4.5 Free uzo ozo ka Photocall TV
4.6 TV Pluto
4.9 eFilm na Ngwa TV
5 Echiche nke onwe
Gịnị bụ Photocall TV?
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, etinyere ọtụtụ ngwa iji lelee DTT na ọwa ndị ọzọ n'efu, mana ọ dị nwute obughi ngwa ndia nile nwere ogologo ndu ma ọ bụ ha na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ngwa TVc Photocall na-arụ ọrụ nke ọma, nwee ndụ dị oke mkpa. Igwe onyonyo foto bụ gụgharia onyonyo kpam kpam iwu na n'efu nke na-agbasa ozi emeghe DTT.
Photocall TV etinyekwala usoro ọrụ ndị gafere ile ihe nkiri, usoro ma ọ bụ mmemme na asụsụ dị iche iche. Na mgbakwunye inwe ike ịlele DTT na ngwaọrụ dị iche iche, Photocall TV na-enye anyị ohere inwe ike gee ọwa redio site na nkwanye, Ọwa DTT mba, Ọwa DTT ọkachamara na isiokwu dị iche iche, otu Nduzi TV na mmemme na oge ha na nchịkọta nke ọrụ VPN iji nwee ike ịlele ma n'ime mba nke ọwa ahụ na site na mba ọzọ.
Photocall TV nwere ụdị weebụ yana ngwa maka gam akporo, maka oge ahụ ngwa a anaghịzi arụ ọrụ ma nsụgharị weebụ ka dakọtara na ngwaọrụ. Site ugbu a gaba, ọrụ a dakọtara na mgbakwunye na ọrụ dị iche iche dị na ama anyị, mbadamba, igwe onyonyo na ihe nchọgharị weebụ. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịlele ya na ngwaọrụ ọ bụla na-enweghị nsogbu ndakọrịta na otu usoro ma ọ bụ akara.
Kedu ọwa ndị m nwere ike ile na Photocall TV?
Ndị nwe obodo
Ugbu a anyị nwere ike lee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ DTT niile dị na SpainNke a pụtara na anyị nwere ike ịhụ ụzọ dị iche iche dịka La 1, La 2, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Mega, Neox, wdg ... yana mpaghara ọwa telivishọn mpaghara, dịka TV3, Telemadrid, ETB ma ọ bụ Canal Sur, na-agafe DTT ọwa nke ụlọ ọrụ akụkọ ka EuropaPress na / ma obu Ọwa DTT nke bọọlụ bọọlụ dị ka ọwa Real Madrid ma ọ bụ ọwa FC Barcelona.
Ọwa mba anyị ga-ahụ na ngalaba a bụ ọwa sitere na mba ndị ọzọ gbasaa site na DTT ma ọ bụ na ntanetị ma site na ndị a, anyị ga-ahụ ọwa ha kachasị ma ọ bụ ọwa ozi ọma. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ọwa BBC na United Kingdom, mana anyị enweghị channel BBC abụọ, BBC Three ma ọ bụ BBC Four. Otu ihe a ga-eme na channelụ ndị ọzọ na mba ndị ọzọ. O di nwute, anyi nwere ike ihu uzo ndia na asusu mbu nke ha na-agbasa, Anyị agaghị enwe ndepụta okwu Bekee ma ọ bụ ntụgharị ha n'asụsụ Spanish belụsọ na ọwa mmiri sitere na ime ya.
Akụkụ "Ndị ọzọ" nwere ọwa telivishọn isiokwu. Ọwa ndị a apụtawo n'afọ ndị na-adịbeghị anya wee ruo ugbu a maka ọrụ ekwentị, mana Photocall TV na-enye anyị ohere ile chanel ndị a n'efu, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile. Isiokwu nke ọwa ndị a dị iche iche, site na mmiri iyi akụkọ ihe mere eme na ntanetị gaa na ntanetịime ụlọ, site na ọwa kichin ma ọ bụ ọwa ụmụaka na nke ndị ntorobịa. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị Photocall TV na-anakọta ọwa nke isiokwu ọ bụla kamakwa ọ na-anakọta ọwa kachasị ama ama nke isiokwu a ma ọ bụ ọwa DTT niile nke isiokwu ahụ.
Ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ redio ndị isi na-agbasa ihe omume ha na ịntanetị. N'echiche a, Photocall TV anaghị emepụta ihe, mana anyị nwere ike ịtụle nke ahụ The Photocall TV ngalaba bụ ụdị ndekọ nke redio na-agbasa n'ịntanetị. Ihe bara uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe redio wee chọọ ime ya ngwa ngwa.
Olee otu Photocall TV si aru oru
Ọrụ nke Photocall TV dị nnọọ mfe, ikekwe ọ bụ ihe dị mma na ngwa a nwere. Na nkebi ọ bụla bụ akara ngosi nwere akara ngosi nke ọwa DTT ọ bụla. Pịa na ya ma ọ ga-eduzi anyị ka ịgbasa ozi ọwa. Ogo nke mgbasa ozi ga-adịgasị iche dabere na ọwa ahụ, mana ọ gwụla ma anyị nwere njikọ ọjọọ, ihe kwesiri ekwesi bu ichota ihe omume dika nke 720 ma obu 1080. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlaghachi na ndepụta ọwa, naanị anyị ga-pịa bọtịnụ azụ nke ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ ngwa ahụ na nke a anyị ga-alaghachi na listi channelụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ, anyị ga-emechi ihe nchọgharị weebụ taabụ.
Ntinye nke Photocall TV dị mfe, anyị ga-emepe ihe nchọgharị weebụ nke ngwaọrụ wee gaa na-esote adreesị weebụ. O di nwute na ngwa gam akporo adighizi aru oru ya mere o bu ugbua nani uzo iji nweta oru Photocall TV.
Otu esi edekọ mmemme
Photocall TV na-arụ ọrụ site na ihe nchọgharị weebụ na nke a na-enye anyị ohere ịnweta ọrụ ndị ọzọ ngwa ndị ọzọ enweghị ike ma ọ bụ enweghị. Na nke a anyị nwere ike dekọọ mmemme a na-agbasa site na Photocall TV maka mgbakwunye maka Chrome kpọrọ Stream Recorder - budata HLS dị ka MP4. Ihe mgbakwunye a na-agbakwunye bọtịnụ ndekọ na ihe nchọgharị weebụ. Anyị na-amalite mgbasa ozi nke usoro ihe omume ahụ ma emesịa anyị pịa bọtịnụ ndekọ ahụ na ndekọ nke mmemme a na-agbasa ga-amalite. Ozugbo faịlụ ahụ gwụchara, a ga-echekwa ya na akwụkwọ anyị ma ọ bụ ebe anyị gosipụtara na "Ntọala" nke mgbakwunye ahụ.
Esi lee Photocall TV na igwe onyonyo anyị
Ọ bụ ezie na Photocall TV bụ ngwa weebụ, nke a apụtaghị na anyị enweghị ike iji ya na ngwaọrụ dị iche iche. Ọzọ anyị na-agwa gị otú anyị nwere ike iji Photocall TV dị iche iche Ngwa metụtara telivishọn, na-enweghị iburu n'uche smartphone, mbadamba na pc, nke anyị nwere ike ịnweta site na ihe nchọgharị weebụ dị ka anyị gosiri n'elu.
Ngwaọrụ Google maka TV na-arụ ọrụ zuru oke na Photocall TV, iji mee ka ọ rụọ ọrụ naanị anyị ga-ajụ site na ihe nchọgharị weebụ na ọ mirrrorcasting na Chromecast ngwaọrụ, nke ahụ bụ, anyị na-eziga ọdịnaya ahụ na gadget. Nanị nsogbu nke ojiji a bụ na anyị ga-ahụrịrị na anyị jiri Google Chrome, Chromium ma ọ bụ nkwekọrịta. Usoro a dakọtara na Mozilla FirefoxNa ụkpụrụ, ya mere, anyị ga-agbanwe ihe nchọgharị ahụ n'ọnọdụ dị otú a ma ọ bụ họrọ iji mgbakwunye na-enye anyị ohere ịlele n'etiti ihe nchọgharị na chromecast. Ọ bụrụ na anyị enweghị kọmputa ma anyị na-eme ya site na mbadamba ma ọ bụ smartphone, anyị ga-eziga ọdịnaya site na ngwaọrụ a akara chromecast dị ka ebe nnata.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu ọdịnaya na ngwaọrụ telivishọn Amazon, anyị nwere ike ịme ya n'ụzọ abụọ. Onye mbụ na-eji gadget ka chromecast na mgbe ahụ site na ihe nkedo na-eziga Photocall TV ọdịnaya na Fire TV. E nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na-enye anyị ohere ịpịgharị n’etiti pc anyị, ama ma ọ bụ mbadamba na FireTV dịka Mirroring Screen ma ọ bụ SendtoScreen maka Fire TV.
Enwere ụdị dị iche iche ma ọ bụ ngwa nke igbe ma ọ bụ minipcs na-ejikọ na telivishọn ma ọ bụ nyochaa ma nwee ike ịgbasa mmemme telivishọn ma ọ bụ ọrụ na / ma ọ bụ egwu. Photocall TV na-akwado ha niile. Maka uto ya, dị ka ọ dị na Fire TV, anyị nwere ike ime ya site na ihe nchọgharị weebụ. Imirikiti minipcs ndị a nwere gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ yabụ ma anyị jiri ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ na anyị nwere ike jiri mirrorcasting ngwa ọdịnala dị ka ọ dị n'ihe banyere Fire TV.
Ngwaọrụ Apple enweghị ngwa Photocall TV na mbụ, mana ebe ọ naghị arụ ọrụ ugbu a, ngwaọrụ Apple nọ nha nha ya na ngwaọrụ gam akporo, maka nke a, anyị ga-eji ihe nchọgharị weebụ iji kpọọ ọdịnaya ahụ. Na ọhụrụ nlereanya nke a Apple gadget ekwe mmekọrịta na anyị iPhone otú anyị nwere ike igwu site na smartphone ma ziga Apple TV ma ọ bụ anyị nwere ike igwu site na Apple TV ma jiri iPhone anyị dị ka njikwa dịpụrụ adịpụ. Ihe masịrị gị.
Free uzo ozo ka Photocall TV
Dị ka anyị kwuru na mbido, ntụrụndụ n'ịntanetị abawanyela na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ma nke ahụ emeela Photocall TV ọ bụghị naanị na ọ na-aga nke ọma kamakwa ọrụ ndị ọzọ na-aga nke ọma n'ụzọ dị ịrịba ama na-eji ọtụtụ puku mmadụ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ọzọ dị adị iji jiri Photocall TV:
Ọrụ a bụ otu n'ime ewu ewu ebe ọ bụ na ọ na-enye ngwa maka gam akporo na Apple TV na, dị ka Photocall TV, ọ na-enye ya n'efu. Otú ọ dị, ọ nwere nsogbu Photocall TV na ọ bụ ya Pluto TV na-enye naanị otu ọwa TV nwere ọtụtụ ọwa mmiri dị iche icheMana ọ naghị enye ọdịnaya mba ụwa ma ọ bụ nweta redio. Ihe dị mma bụ na ọ bụrụ na ọ dakọtara na iOS na ngwaọrụ ya, ọ nwere ngwa nke anyị nwere ike ịlele ọdịnaya.
Ruo oge ụfọdụ, ndị ọrụ Gnu / Linux nwere nhọrọ na-adọrọ mmasị nke toro ma ọ bụghị naanị ihe ọzọ na Photocall TV kamakwa. mpi na Netflix n'onwe ya n'elu ikpo okwu ọ bụla. A na-akpọ ọrụ a Plex.
Plex bụ ọrụ na ngwanrọ arụnyere na ihe nkesa gị nakwa na ya na uru ya anyị nwere ike nweta omenala netflix nke ahụ nwere ike ịgbasa redio na ọwa DTT, anyị niile na nzuzo. Nsogbu nke sistemụ a bụ na anyị ga-achọ ịnweta sava nkeonwe nke nwere ike ịbụ kọmputa anyị ma ọ bụ obere minipc.
Ga-ekwe omume nke lelee channelụ DTT site na ndepụta IPTV. Ndetuta egwu ọkpụkpọ a dị ka ndepụta ọkpụkpọ Spotify. Na ihu bụ na ụfọdụ frequencies na Adreesị IP Channel na-agbanwekarị wee chanel ndị agbakwunye na ndepụta ndị a kwụsị ịrụ ọrụ. Ihe dị mma bụ na anyị nwere ike iji ndepụta ndị a na ngwaọrụ ọ bụla ebe ọ bụ na ọtụtụ egwuregwu, ma gam akporo na iOS, dakọtara na ha. Ọbụna ihe ngosi ndị ama ama VLC y Kodi nwere nhọrọ igwu egwu ndepụta TV ndị a.
eFilm na Ngwa TV
Enwere ike iji aka aka rụọ ọrụ TVcall TV, ya bụ, anyị ga-aga weebụsaịtị nke ọwa TV ọ bụla ma anyị lelee ya ma ọ bụ anyị na-ebudata ngwa ngwa ahụ wee jiri anya nke uche hụ ya. Ihe na-ezighi ezi nke a bụ na anyị ga-achọ ịwụnye ihe karịrị 100 ngwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe otu ihe ahụ dị ka Photocall TV, na-echezọghị nsogbu nchebe anyị nwere ike ịnwe ya. Isi okwu dị mma bụ na anyị ga-elele ọwa ahụ na oke mma yana n'ọtụtụ oge anyị ga-enwe ike ilele mmemme mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Ọrụ Ọgụgụ Ọha nke Gọọmentị nke Spain amalitela maka ọnwa a free online nkiri na usoro ego ọrụ. A na-akpọ ọrụ ahụ Ihe nkiri. Ejikọtara ọrụ a n'ime eBiblio ọ na-enye anyị ọtụtụ katalọgụ nke ihe nkiri, akwụkwọ akụkọ na usoro, mana anyị ga-enwerịrị eBiblio. Ihe dị mma banyere ọrụ a bụ na anyị nwere ad-free ọdịnaya na ngwaọrụ ọ bụla. Ihe ọjọ banyere ya bụ na anyị ga-enweta ya naanị ụbọchị asaa ma anyị ga-emegharị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ya ọzọ. Ọzọkwa, lngwa maka ngwa mkpanaka anaghị adịkarị mma ọ bụ ezie na ha na-adị maka ma gam akporo na iOS.
Echiche nke onwe
Ruo ogologo oge, ọbụlagodi tupu nsogbu COVID19, ana m eji ọrụ telivishọn dijitalụ ma ọ bụ telivishọn site na nkwanye. Ọ dị ka ihe ọhụụ nye m na Achọpụtara m na ha bara uru karịa iji ọwa TV, n'ihi na ihe ndị ọzọ ị na-echekwa mgbasa ozi. Mana na mgbakwunye, ọrụ ndị a na-enye gị ohere ịnweta mmemme nke ị gaghị enwe ike ịnweta, dịka ọwa mmiri ma ọ bụ ọwa mba. N'ụzọ dị mwute, maka ọtụtụ ọrụ ndị a metụtara ngwa hacker ma ọ bụ ngwa iwu na-akwadoghị ma ha abụghị otu ma ọ bụ nke ọzọ. Opekempe na Photocall TV na ihe m gbalịrị. Ihe kacha masị m banyere Photocall TV bụ odide nke ọdịnaya ya naanị peeji atọ. Dị ka a ga-asị na a TV ndekọ na ha niile na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ị gaghị ahụ mmejọ ọ bụla nke ọdịnaya na-ezighi ezi ma ọ bụ na ọ dịghị adị, belụsọ ma webụ na-arụ ọrụ dị njọ n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ndị ọrụ, nke na-eme mgbe ụfọdụ.
Maka ihe a niile m na-akwado ka ị jiri ọrụ a, na mgbakwunye, ugbu a nwere ezigbo ihu igwe na ezumike, Photocall TV bụ ezigbo nhọrọ iji ghara iburu telivishọnAnyị ga-achọ mbadamba ma ọ bụ smartphone n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Photocall TV, nhọrọ na-adọrọ mmasị iji lelee DTT ebe ọ bụla
Ezigbo akụkọ. Ọ dị m ka ya bụrụ na m hụtụrụla nke a na mbụ, ahụrụ m ya n'anya ... ọkachasị mgbe ọ bụ iko America ilele egwuregwu. Ahụrụ m weebụsaịtị a n'anya.
Nnukwu sitere na Colombia
Zaghachi JUAN REYES GUERRERO
Daalụ nke ukwuu maka ịgụ anyị. Obi dị m ụtọ na ị hụrụ na ọ bara uru n'agbanyeghị na abịaghị m n'oge, mana hey, iko America agaghị akwụsị, maka oge ọzọ ị nwere ike iji ya. Echiche kacha mma!!!
Juan Reyes Guerrero nke Elizondo dijo
Daalụ maka ịza… Ana m aga na blọgụ kemgbe m bidoro na Ubuntu 14.04
Zaghachi Juan Reyes Guerrero si Elizondo
bara ọgaranya dijo
M na -ejikarị mmemme nke na -eweta Linux distro ọkacha mmasị m akpọ Hypnotix, ahụrụ m ụdị nkuzi a ekele gị nke ukwuu maka ime ya, ahapụrụ m gị ndụmọdụ nwere ụgwọ ọrụ nwere obi ike na ọ ruru gị ^^
CBL-Mariner, nkesa Linux Microsoft rutere na mbipute 1.0
Nsogbu dị na Coursera API nwere ike ikwe ka ọnụọgụ nke data onye ọrụ